Raymond isigayo - China Raymond isigayo Supplier,Factory -PYM
Raymond Mill iyona umsunguli Pendulum Ukugaya Mill, kuba ethandwa ukugaya isigayo kakhulu ukukhiqiza powder.It ezomile kusetshenziswa kakhulu ugaye iyiphi namaminerali-non-metal ne Moh \_ 's ubulukhuni ngezansi 7 futhi umswakama ngezansi 6%.
Max usayizi yokudla:
isibonda, calcite, carbon isebenze, i-talc, dolomite, titanium dioxide, asebenza ngebhethri, bauxite, zemabula, feldspar, i-fluorite, Gypsum, isithiyo, ilmenite, phosphorite, ubumba, graphite, kaolin, idokhumenti, gangue, wollastonite, esheshayo lime, silicon Carbide, bentonite, manganese
Raymond isigayo kwazivelela Raymond abafowethu 1880s. Raymond isigayo yethulwa China azungeze 1950s. Ngokuya pendulum bendabuko roller isigayo, esigayweni R-uchungechunge ukugaya sesithuthukisiwe ezicini eziningi. Konke nemingcele lobuchwepheshe ukuthatha indima yokuhola China isigayo umkhakha. Umnyango we-R-chungechunge ukugaya isigayo amabanga kusuka 2R ukuba 6R, kufaka 2R2713, 3R3220, 4R3216, 4R3218, 4R3220, 5R4121, 5R4125, 6R5127.
impahla eluhlaza is okokuqala banqanyulwa crusher emhlathini ku obudingekayo kuyizinhlayiyana, okwenziwa ngamabhakede ikheshi kuze kube hopper isitoreji. I Element vibration ke lidlulisela izinto luthuli ngesilinganiso fixed ekamelweni ngokugedla iyunithi esiyinhloko pulverizing.
I ezinamasondo amathathu hung phezu spider ingalo ezisebenzayo emhlabeni kushaft. Nge amandla centrifugal, i-ezinamasondo amane ukujikeleza uzohamba emhlabeni indandatho uvalwe. Izinto zokusetshenziswa ifakwa phakathi ezinamasondo amasongo ngu ikhaba ukwenza izinto zokusetshenziswa zibe impuphu. Izinto grinded afuthe kuze kube somhleli, okuyothi ngalo powder ahlukaniswe i Ukuhamba.
izinhlayiya Maholoholo kuwele emuva phansi esigayweni ngoba regrinding.
I izinhlayiya kwakudingeka izoya ngalendoda lapho imikhiqizo izosuswa ngembobo osenyameni. Umoya nahlanza ageleza eya Blower emoyeni ngokusebenzisa ipayipi ngenhla enkulu isishingishane ngalendoda. Air flue kuyinto uhlobo isiyingi. Air kusakazwa zonke amapayipi kunengcindezi omubi ngaphandle ukuthi Blower emoyeni kanye negumbi ukugaya, okwalithuthukisa isimo abasebenza workshop.
Umoya ivolumu emoyeni inyuka flue njengoba umswakamo izinguquko ezibalulekile ku umusi avuzayo e kusukela izihlanganiso flange futhi ukuvulwa okuphakelayo. Kungezwe emoyeni ivolumu uthutha ngokusebenzisa Blower emoyeni futhi emva-umoya ipayipi, ukuze ngalendoda elula. I powder ekupheleni engena ngalendoda nge ukusakaza emoyeni futhi akhishwe osenyameni valve.
1. Wokugaya uncipha ungaphakathi isakhiwo stereo-chemical, kudle isikhala esincane phansi. Imishini has eqinile ehlelekile ngoba kungaba ukuhlela uhlelo ezimele futhi ephelele ukukhiqizwa ukuchotshozwa eluhlaza impahla, zithutha, ukugaya ekukhiqizeni ukubuthwa, ukugcina kanye ukupakisha.
2. uhlelo Ukushayela (Ukuzilungiselela double, Ukuzilungiselela olulodwa futhi reducer) futhi uhlelo ngetigaba (somhleli futhi analyzer) kungenziwa amisiwe ngokuvumelana nemfuneko impahla noma ikhasimende, ukuze kuqinisekiswe umhlabeleli isimo ukusebenza.
3. Kuye impahla ukulungisa ipayipi futhi Blower uhlelo, ukuze kuncishiswe umoya ukumelana nogwali nemihuzuko, ukuqinisekisa umthamo high.
4. Zifakwe izinga okusezingeni ukushwaqa steel ukukhiqiza izingxenye ezibalulekile, osetshenziswayo ukusebenza high impahla bafake ukumelana umkhiqizo izingxenye bafake nemithi. Imishini has okusezingeni eliphezulu impahla bafake-simelana futhi operation okuthembekile.
5. Eyodwa elawulwa uhlelo kagesi waqaphela operation unmanned kanye nokugcinwa lula.
6. Pulse ohlelweni qeda singasebenza ziphathelene ukuhlala emoyeni. Ukuhlunga kahle ongafinyelela 99.9%.
inothi:I umthamo idatha kuyinto ngoba limestone.